घर र परिवार | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: घर र परिवार
क्यासिनो 23 मा एक व्यक्तिलाई के दिनुहुन्छ?
हाम्रो देश मा फादर्ल्याण्ड दिवस को डिफेन्डर अव्यवस्थित पुरुष दिवस मा परिणत भएको छ। हामी पुरुष २ to लाई फेब्रुअरी २ serve लाई राम्रो उपहार दिन प्रयोग गर्दछौं, चाहे उनीहरू सेनामा सेवा गरेको होस् वा नहोस्। र ...
तोते भट्ठी र अन्य को विवरण
धेरै व्यक्तिहरू घरमा फरक घरपालुवा जनावरहरू राख्छन्। बजारीगर सामान्य छ। बच्चाहरूका लागि विवरण विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, फोटोग्राफहरूसँग स्पष्टसँग वर्णन गर्न कि यो कस्तो किसिमको चरा हो। यसलाई घरमा राख्नको लागि यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ ...
कर्पोरेट पार्टीमा टोस्ट - तपाईको आफ्नै शब्दहरूमा धेरै इमान्दार
कर्पोरेट पार्टीमा टोस्ट के हो? आफ्नै शब्दमा बोलेको, यो कहिलेकाँही वास्तविक कार्यक्रममा परिणत हुन्छ। भाषण अग्रिम तयारी गरिनु पर्छ। सहयोगीहरु बीच, सार्वजनिकमा माइक्रोफोनमा केहि शब्दहरू भन्न सक्ने क्षमता हो ...
गर्भावस्थाको बेला ब्याक्टेरिरीरिया: लक्षणहरू, उपचार
गर्भधारणको समयमा, गर्भवती आमा विशेष गरी उनको भलाईको लागि संवेदनशील हुन्छन्। यद्यपि यसले फियरर सेक्सलाई विभिन्न विकृति र रोगहरूबाट बचाउन सक्दैन। प्रायः, गर्भवती आमाहरूलाई सामना गरिन्छ ...
कुकुरका लागि मजेदार उपनाम (केटा र केटी)
धेरै व्यक्तिहरू, कुकुर पाउनु अघि, नामहरू आगाडि आउँछन्, व्यवहारको भविष्यवाणी गर्ने कोशिश गर्छन्। र उहि समयमा, सबै जना पाल्तु जनावरलाई एक मूल र सम्झना योग्य उपनाम दिन चाहन्छन्। कुकुरको लागि एक राम्रो उपनाम हो ...
ब्यान्ड पूलहरूसँग विवरण: वर्णन र फाइदाहरू। सुक्खा बॉल पूल कसरी बनाउने?
हाम्रो समय मा बच्चाहरु को लागी धेरै मजा छन्। यस लेखमा, तपाईंलाई सुक्खा बल पोखरीमा परिचय दिइनेछ। तपाईं फेला पार्नुहुनेछ कि त्यस्ता खेल केन्द्रका के फाइदाहरू छन्। कति पत्ता लगाउनुहोस् ...
बालबालिकाको औसत समूह। मध्य समुहमा कक्षाहरू
बालवाडीको मध्यम समूह चार वर्ष उमेरका बच्चाहरू द्वारा भाग लिन्छ। त्यस्ता विद्यार्थीहरूले बिषय बिचको सम्बन्धलाई बुझ्छन्। गतिविधिमा, तिनीहरू वयस्कको कार्य चित्रण गर्न को लागी कोशिश गर्छन्। जब गाह्रो परिस्थिति खडा हुन्छ, बच्चाहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रयास गर्छन् ...
"फेलिक्स" (बिरालाहरूको लागि खाना): खरीददारहरू र पशु चिकित्सकहरूको समीक्षा
धेरै फ्युरेज पाल्तु जनावर मालिकहरूले तिनीहरूको बिरालो, बिरालो र बिरालोका बच्चाहरूलाई खान तयार छनौटको लागि छान्छन्। आज रूसी बजारमा त्यहाँ बिभिन्न उत्पादकहरूबाट धेरै उत्पादनहरू छन्, र ती मध्ये एउटा बिरालो हो ...
कुत्ता दूध बनाउने मिसिन: चयन, खरिद, दूध, तीव्रता, मूल्यहरू र मालिकहरूको समीक्षाहरू। पेशेवर देखि सस्ता र म्यानुअल कुत्ते कप्पर्स बाट
यदि तपाईंसँग यस जातको कुकुर छ जसलाई निरन्तर संवन्ध आवश्यक छ, तब तपाईंलाई विशेष क्लिपर चाहिन्छ। यहाँसम्म कि यदि तपाईंको घरपालुवा जनावर एक विशेष सैलुनको लागि एक आगन्तुक हो, त्यो हो ...
Broad Maslenitsa। Shrovetide को उत्सव
विस्तृत मास्लेनिस्टा, Krivosheyka, Pancake, Obyedukha, मास्लेनाया हप्ता - यो एक र उस्तै छुट्टी हो जुन लगभग विश्वभरि मनाइन्छ। यस छुट्टीको अर्थ हिउँद र वसन्त बीच भिन्नता हो ...
कसरी नयाँ नवजात बालकलाई धोका दिने? केटालाई कसरी धुनु पर्छ
अभिभावक प्राय: सफा प्रक्रियाहरूको सही कार्यान्वयनको बारेमा चिन्ता गर्दछन्, नुहाउने, धुने र नवजात शिशुको बाह्य जननेंद्रिय अंग पाउडर, क्रीम वा तेल सहित उपचार सहित। बच्चाको छाला एकदम नाजुक हुन्छ, उचितको अभावमा ...
बच्चामा बच्चा बच्चाहरु मा सिंक को लक्षण र उपचार
श्वासप्रश्वासको पथको एक रोग जसमा स्वरयन्त्रको स्टेनोसिस हुन्छ र चिकित्सा विज्ञानमा क्रउप भनिन्छ। यो रोग निम्न लक्षणहरूसँगै आउँदछ: श्वासको शोरापन, हार्सनेस, "बार्किंग" खोकी, सासको दुखाइ। बाल क्राउप - ...
बालवाडी समूह नाम - कसरी छनौट गर्ने?
किन्डरगार्टनमा समूहको नाम ठूलो महत्त्वको छ। वयस्क र बच्चाहरूका लागि यो अधिक चाखलाग्दो हुन्छ जब सामान्य "कान्छी समूह" वा "समूह नम्बर २" को सट्टा केही रोचक नामको ध्वनि हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तित्व प्रकट हुन्छ। संग आउनुहोस् ...
तपाईलाई किन टिकट चाहिन्छ? कुञ्जीहरू पहिचानको लागि ब्रान्ड गरिएका छन्। तिनीहरूले कसरी गर्छन्?
पशु पहिचानको यो विधि कृषि र घरेलु पाल्तु जनावर र जंगली जनावरहरूमा पनि लामो समयदेखि प्रयोग भइरहेको छ। पछिल्लाहरूले प्रवासमा पढ्नको लागि यस्तो हेरफेर गर्दछ। कृषि मा, तिनीहरूले मार्क ...
चिकनी बाक्लो खिलौना टेरियर: नस्ल वर्णन, हेरविचार र रखरखाव
चिल्लो-कपालयुक्त खेलौना टेरियर आकारमा सानो छ। तर ऊ आफ्नो जातको पूर्ण प्रतिनिधि हो। यो कुकुरलाई राख्न गाह्रो छैन, किनकि खेलौना टेरियर सानो छ, औसत २ किलोग्राम तौल, जुन भन्दा कम हो ...
बिरालोहरू किन आँखाका साथ जन्मिएका छन्?
यो लामो समयदेखि विश्वास गरिएको छ कि बिभिन्न आँखाका बिरालाहरूले उनीहरूका मालिकहरूका लागि राम्रो भाग्य ल्याउँछन्। वैज्ञानिकहरूले वर्षौंदेखि यो अनौंठो र कहिलेकाँही ठाडो डरलाग्दो दृश्य के हो भनेर बहस गरिरहेका छन। केही तर्क छ ...
कैटफिश Synodontis: प्रकारहरू, वर्णन र सामग्री
नविकरण एक्वैरिस्टहरूले प्राय: धेरै समस्याहरूको सामना गर्दछन्। एक्वैरियमको तल्लो भाग चाँडै माटोको साथ बढेको छ, पानी हरियो हुन्छ, महँगो माछा बिरामी हुन्छ र मर्दछ। तपाइँ यहाँ पेशेवर सल्लाह बिना गर्न सक्नुहुन्न। र ती मध्ये एक ...
कुत्ता इटालियन ग्रेहाउन्ड: प्रजातिको विवरण (फोटो)
इटालियन ग्रेहाउन्ड कुकुर एक सानो, रमाईलो र आकर्षक पशु हो जसको कोमल चरित्र छ र बच्चाहरू, शिशुहरू समेतसँग राम्ररी मिल्छ। जनावरहरू लजालु छन्, त्यसैले अप्रत्याशित कार्यहरू तुरून्त प्रतिक्रिया द्वारा अनुसरण गरिनेछ। इटालियन ग्रेहाउन्ड ...
बालवालिकामा शारीरिक शिक्षाको लागि गैर-परम्परागत उपकरण। उत्साहित शारीरिक शिक्षा
सबैको लागि शारीरिक गतिविधि जीवनमा ठ्याक्कै त्यस्तै उपस्थित हुनुपर्दछ कि शरीरलाई स्वस्थ राज्य र आकार कायम गर्न आवश्यक छ। नर्सरीमा शारीरिक शिक्षाको लागि समय ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 47 अर्को पाना
66 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,933 प्रश्नहरू।